Xaalad walwal ah oo lasoo darsay xaaska Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka | Dhexnimo Media
Home Wararka Xaalad walwal ah oo lasoo darsay xaaska Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka
Xaalad walwal ah oo lasoo darsay xaaska Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka
Michelle Obama oo ah xaaska Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Brack Obama ayaa sheegtay in nolosheeda xiligan lasoo darsay walwal sababay in habeenkii xili dambo ay hurdada kasoo toosto.
Waxa ay sheegtay Michelle Obama walwalka lasoo darsay in uu ka dhashay xayiraada uu keenay cudurka Caronavirus iyo sidoo kale cadaalada darada ku saleysan midabka gaar ahaan xadgudubyada lagula kacayo dadka madowga ah.
”Waxaan soo kacaa habeenkii xilli dambe, sababtuna waxa weeye in aan ka walwalayo wax culeys igu hayo,ma ahan oo keliya in aan ka walwalsanahay xayiraadda dhanka socdaalka ee feyraska corona ee sidoo kale waxaan ka niyad jabsanahay dhibaatada midabka ku saleysan oo maamulka madaxweyne Trump uu indhaha ka daawanaya har iyo habeen, waana waxa sii murjineysa walwalka aan qabo”ayay tiri Michelle Obama.
Xaaska Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sheegtay in waxa walwalka nolosheeda lasoo darsay kusoo kordhiyay tahay cadaalada darada iyo eedaha aan jirin ee dusha laga saaro dadka madowga ah .
“In mar walba aan aragno qof madow ah oo la bahdilay, eedeyn aan jirinna dusha loo saarinayo waa waxyaabaha walwalka igu beeray, waxay taasi keentay in culeys aan noolasheyda i fuulin aan dareemo, ayey intaa raacisay Michelle Obama.
Michelle Obama ayaa marar badan ku dhaleeceesay maamulka Madaxweyne Trump in uusan waxba ka qaban cadaalada darada iyo midab kala sooca, waxa ayna sheegtay in Madaxweynaha naftiisa qeyb ka yahay ficilada xun xun.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Qarax xoog leh oo ruxay magaalada Beirut
Next articleQaraxii ka dhacay Beirut Wuxuu Hoy La’aan Ka dhigey 300,000 Qof waxaana ka dhashay khasaare dhan $ 15 bilyan